Tenga Megestrol acetate powder (595-33-5) hplc =98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Megestrol acetate upfu
Rating: SKU: 595-33-5. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hweMegestrol acetate powder (595-33-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Mazita echigadzirwa: Megace, Megace ES
Zita rechizvarwa: megestrol (Kutumidzwa: meh JESS trol)
MGA inoshandiswa kunyanya sechirwere chekudya chinokurudzira kuwedzera kuwanda mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana.Ipapo paine hurukuro yakawanda, inogona kuwedzera kukudya kwevanhu vakawanda, kunyange avo vane kenza yakakurumbira, uye inowanzoshandiswa kukurudzira kudya uye kuwedzera kuwanda kuwanikwa mune varwere vane kenza kana kuti HIV / AIDS-inosanganiswa nekachexia. Mukuwedzera kune zvinokonzerwa nechido, MGA inoratidzika ine antiemetic effects.MGA inoshandiswa seanorinoplastic agent mukurapa kenza yemazamu nekenza yemapendometria. kusvika kune aromatase inhibitors mune zvose kugona kwechiremba uye kushivirira sechipiri chetachiona chekenza yepamuviri shure kwekukundikana kwetamisixifen.MGA yaimboshandiswa mukubatanidza kubata pamuviri pamwe chete neye ethinylestradiol kana mestranol, uye yakashandiswa mukubatana kwepurojekiti inosanganiswa pamwe chete ne-estradiol naizvo.
Kunyange zvazvo isina kubvumirwa nekuda kwekushandiswa uku, MGA yakadzidzwa uye / kana kushandiswa kure-label kune zviratidzo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira menopausal hormone therapy uye kurapwa kwemazimbe anopisa, gynecological / menstrual disorders, endometriosis, endometrial hyperplasia, kenza yevana, kenza yeprotate, benign prostatic hyperplasia, kenza yemazamu yemukomana, uye utano hwepakutanga.
Chirwere chekudya chinokonzerwa neMGA neminzwi inonzi 400 kusvika ku800 mg / zuva.Iyo yakakosha miyero ine huwandu hwechigadziro chekudya kwekudya yakave yakagadzirirwa kuva 800 mg / zuva.Iyo inorayirwa mushonga weMGA nokuda kwekenza yemvere ndeye 40 mg kana zuva nezuva (160 mg / zuva rose), apo mishonga inoshandiswa pamuromo we 40 kusvika ku320 mg / zuva mumadhara akaparadzana kwekenza yemapendometria.Iye yakashandiswa pamatare akadzika zvakanyanya (semuenzaniso, 1-5 mg / zuva muromo, 25 mg / mwedzi im) pamwe chete nesrogen nekuda kwekudzivirira kubata pamuviri.
Chii chinonzi Megestrol acetate (CAS 595-33-5)
MGA inowanikwa se-5 mg, 20 mg, uye 40 mg mapiritsi emuromo uye mumisimiriro yomumuromo ye40 mg / mL, 125 mg / mL, 625 mg / 5 mL, uye 820 mg / 20 mL.Iye yakashandiswa pamitambo ye1 mg, 2 mg, 4 mg, uye 5 mg mukubatana kwemishonga pamwe chete. MGA yakashandiswa pachirwere che 25 mg pamwe neestrogen mukubatana nekudzivirira kubata pamuviri.
MEGACE (megestrol acetate, USP) Oral Suspension ine megestrol acetate, yakagadzirwa nemaitiro ekutora steroid hormone, progesterone. Megestrol acetate is white, crystalline yakasimba chemhemikari yakasarudzwa se17α- (acetyloxy) -6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione. Simba pa 37 ° C mumvura inonzi 2 μg per mL, kusvibiswa mu plasma kuri 24 μg per mL. Iko molecular weight is 384.51. Icho chimiro chechimiro cheC24H32O4.
Megestrol inogona kukuvadza mwana asati aberekwa kana kukonzera kukanganisa kuberekwa. Usashandisa megestrol kana iwe uri nepamuviri.
Usati watora megestrol, udza chiremba wako kana iwe une chirwere cheshuga kana nhoroondo yekurova kana ropa.
Yako dosi zvido zvinogona kuchinja kana iwe ukavhiyiwa, uchirwara, uri pasi pekunetseka, kana uine hutachiona. Usachinje mushonga wako wemishonga kana purogiramu pasina mazano echiremba wako.
Megace ES ine nzvimbo yakakwirira ye megestrol kupfuura Megace. Kumbira mushonga wemapurisa kana iwe uine mibvunzo pamusoro pemishonga yaunowana pane homisi.
Ine Megestrol acetate Ive Neshamwari Dzose
Izvozvo zvinowanzovhiringidza maitiro eMGA kuwedzera kuwedzera, pamwe nechiitiko che15 kusvika ku70% pamadhora makuru anoshandiswa kurapa kenza yemazamu. Zvimwe zvinokonzera zvinosanganisira kubuda ropa (7-8%), nausea (7%), uye edema (5%), pamwe chete nezvimwe zvakadai sechizzinesi uye kupererwa kwemhepo. MGA inogona kukonzera hypogonadism uye zviratidzo zvinosanganiswa sechidiki chepabonde zvido zvepabonde, kusagadzikana kwepabonde, osteoporosis, uye kutadza kusununguka kwevarume nevakadzi vepremenopausal.Combining MGA ne androgen / anabolic steroid seyandandrolone, nandrolone decanoate, kana kuti testosterone muvarume inogona kuderedza zviratidzo zveMGA-zvinosanganiswa zve hyporrogenism pamwe nekuwedzera kuwedzerwa kudya uye kuwedzera kuwanda .Zvizhinji zvinowanzova zvakakomba migumisiro yeMGA inosanganisira matambudziko ehutano / thromboembolic zvakadai seprombophlebitis. Zvinogona kukonzera glucocorticoid nemigumisiro yakadai seCushing syndrome-like zviratidzo, steroid chirwere cheshuga, uye adrenal kusagadzikana papamusoro dheji. Itai mhinduro dzemvura yakadzika yevhein, pulmonary embolism, jaundice, intrahepatic cholestasis, uye meningiomas musangano nepamusoro-dhadhi MGA vane yakabudiswa.
Nzira yekutenga Megestrol acetate powder kubva kuAASraw